La heli karo si LiveCD looga tijaabiyo Tanglu | Laga soo bilaabo Linux
Ma xasuusataa - Tanglu, Qaabkaas aan ku jeclaaday anigoon xitaa ka tegin?
Tanglu waa distro ku saleysan Imtixaanka Debian oo balan qaadaya inuu cusbooneysiin doono xitaa marka keydadka la qaboojiyo. Hagaag, waxaan horey uheynay isos (LiveCD) si aan u tijaabino.
Waqtigan xaadirka ah waxay la timaaddaa oo keliya KDE SC, inkasta oo ay horumariyayaasheedu balanqaadeen inay taageeri doonaan inta ka hartay Degaanada Desktop-ka. 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » La heli karo si loo tijaabiyo Tanglu LiveCD
Baadi 404 - Elav madax lama helin 😀
Waa in hadda la hagaajiyaa.
Ku jawaab Rohan
Dhab ahaan, faylalku ma sii jiraan, waa inaad isticmaashaa mid ka mid ah ISO-da laga bilaabo http://209.141.41.194/tanglu/cdimage/
rabshado ayaa loo rasaaseeyay si looga baxo magaaladooda !!!
Waxay ii sheegaysaa taas lama helin!
Lama helin !!!
Ku jawaab HashPack
Xidhiidhka "NO FOUND" ma shaqeynayo
Hadda way shaqaysaa!
Maxay keyd u leedahay?
Horey waan iskuday oo waxay leedahay keyd tanglu u gaar ah
Warkan iyo anigu waxaan ku jirnaa fasalada Khatarta Dhulgariirka iyo Qiimeynta. Shit! Ma jiraan dhibaatooyin ku saabsan xiriiriyeyaasha? Ma rajaynayo maxaa yeelay isla marka aan guriga imaado waxaan soo degsadaa LiveCD 😀
Waa maxay magaca isticmaale iyo ereyga sirta ah ee lagu galayo?
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, waxaan isku dayay inaan tijaabiyo 'LIVE distro' waxayna waydiisataa isticmaale oo way dhaaftaa, waxaan isku dayay kuwa caadiga ah mana soo galo.
Wow iyo waan faraxsanahay ...
Isticmaalaha: 'isticmaale', ereyga sirta ah: 'live' (Qiimo la'aan)
Sidaan horeyba ugu dhigay faallo hore adeegsadaha waa: 'isticmaale', erayga sirtana waa 'live'
Fadlan akhri http://lists.tanglu.org/pipermail/tanglu-devel/2013-August/000295.html wixii faahfaahin ah.
War nin waryaa! iyo bogga Tanglu horeyba wuu u shaqeynayaa markaa? Ka waran qayb ka mid ah ogeysiiska ku qoran liiska boostada ama wixii la mid ah? ha nooga tagin nin gees ah!
Waxaan nuqul ka sameeyaa xayeysiiska aan ku arkay liiska Tanglu devel:
Ka dib xoogaa khalad ah oo ku saabsan live-config, hadda waxaan wareejin karnaa sawirro shaqeynaya oo toos ah oo tanglu ah .
(daliil ahaan waxaad ka heli kartaa kde tusaale ahaan sawirada , wareegyo kale ayaa raaci doona. Isticmaalaha: 'isticmaale', eray sir ah: 'live')
Sawirradu hadda waa kuwo KALIYA oo aan lahayn wax rakibiyayaal ah, xitaa haddii aad dooran karto rakibidda liiska syslinux - si fudud wax uma tarto.
Wax yar ayaan horumar ka sameeyay rakibayaasha debian-ka, laakiin wali way ku fashilan tahay talaabada dejinta shabakada sidaa darteed waxay u baahan tahay shaqo badan. Waan idinla socodsiin doonaa
Tilmaamaha dhismaha ee sawirrada tooska ah waxaa laga heli karaa  oo loogu talagalay dadka xiiseynaya.
Qaabeynta waxaa laga heli karaa damqasho . Waqtigan xaadirka ah waxa ay abuuri doonto oo dhan waa kde sawirada waxaadna arki doontaa in sawirada wali ay leeyihiin Debian oo ah magac distro oo meesha oo dhan ah, laakiin way shaqeysaa 😉
Haa, ugu dambeyntii Debian maalin.
Shaqo wacan dadkaan.
Sidee ayey u cusbooneysiin doontaa distro-kan, iyada oo lala xiriiriyo sii deynta "ugu caansan", arch iyo gentoo (sabayon) oo qaadata dhowr maalmood si ay xirmo cusub ugu hayaan keydadka?
maahan maalmo, bilo.
sabayon waxay qaadataa maalmo kaliya xirmooyinka qaar, maxaa yeelay gnome waxay qaadatay in kabadan 3 bilood.
Aynu isku dayno distoorkan, xilligan xaadirka ah waxaan aad ugu qanacsanahay Solydxk, oo waliba ku saleysan baaritaanka debian 7
LiveCD-kan miyaan lagu rakibikarin? Qof kasta oo horeyba isku dayay?
Looma rakibi karo. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad rakibto laakiin waxba ma qabanayso.
Degsado si aad u tijaabiso. Sikastaba ha noqotee websaydhkooda waxba kama sheegaan oo waxaan iska diiwaangeliyey liisaska dirista oo iyaguna waxba ma aysan dirin.
Goorma markii nooca leh Gnome? = S
Waqti badan ayey qaadatay ilaa aan ku faraxsanahay sii deynta qaybinta, waxaan rajeynayaa mashruucan =)
Waxaan u hambalyeynayaa kuwa ka dhigay tan 'distro' inay bedel u tahay Imtixaanka Debian (iyo Degganaansho la'aan).
Sidoo kale, waad arki kartaa in muuqaalka miiskaasi uu wanaagsan yahay.
Weli wuu cagaaran yahay, waa inaan sugnaa in yar oo dheeri ah 🙂
Hadaad saxsantahay Aad bey cagaar u tahay inaad si buuxda ugu raaxeysato.
Waxaan eegay arinta noocyadooda oo way ka yar yihiin ama ka siman yihiin kuwa Kubuntu, laakiin nooca rekonq waa duug, ma fahmin kiiskan go'doonsan.
Amarok's wuu ka sareeyaa (2.8 vs 2.7) iyo LibreOffice sidoo kale (4.0.3 vs 4.0.2, taas oo hadii tani ay noqon laheyd nooca ugu dambeysa waxaan u maleynayaa inay iska ilaalinayaan noocyada 4.0.3 iyo 4.0.4 ciladaha qaarkood awgood). Teeda kale, maxay LibreOffice iyo Calligra u wada yihiin?
Waxyaabaha kale ee maqan ayaa ah Firewall-ka doorbidista nidaamka KDE, waxaan rajeynayaa inay ugu yaraan ku imaan karto goobaha keydka.
Waxaanan doonayay inaan arko maareeyaha baakadka garaaf ee aad adeegsan lahayd (Waxaan rajaynayaa Muon oo ay kujirto Muon Discover).
Waxaan rajeynayaa inay heystaan ​​wax walba oo laga heli karo meelaha keydka ah oo ay ka mid yihiin waxyaabaha sida Steam, Skype ... Mana garanayo inay suurtagal tahay in lagu daro PPAs.
Way cadahay inay tahay inay sifeeyaan oo ay waxyaabo qaar dhameeyaan, laakiin uma arko muuqaal xun ...
By the way, waxaan jeclaan lahaa inay isticmaalaan LightDM-KDE halkii ay ka isticmaali lahaayeen KDM ...
Waxay u muuqataa in labadiinuba aad rakibteen inkasta oo midka ka muuqda bilowga uu yahay KDM.
Dhanka kale, waxaan u maleynayaa inaan akhriyay waqtigaas in la cusbooneysiin doono 6dii ama 7dii biloodba mar this Ma sidaas baa? Miyay lahaan laheyd ogeysiis cusbooneysiin iyo cusbooneysiin qaab muuqaal ah sida Ubuntu iyo qoyska? Waxaan rajeyneynaa, inay tahay wax muhiim u ah isticmaaleyaasha aan raacin dunida hadda jirta ee GNU / Linux.
In kasta oo waxa run ahaantii fiicnaan lahaa ay tahay inay ahayd sii deyn semi-rogid ah ...
Waa hagaag ... Oo maxay qaybintaani leedahay oo aan lahayn debian 7.1 kde oo leh bakhaarro tijaabo ah?
Aah! haa ... waxay leedahay gidaar ka duwan kii hore.
Jawaab inaad faallo ka bixiso
Waxaan kaa badbaadinayaa dhibaatada baaritaanka ka hor intaadan dhihin waxashnimada ... https://blog.desdelinux.net/tanglu-otra-mas-del-monton/
kan ama solyd?
Solyd, maxaa yeelay wali si fiican looma xasilin, si fiican maxaan dhahnaa.
f * ck haa!
Waan jeclahay debian xasilloon, laakiin ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa xanaaq gaar ah markaan u baahdo muuqaal gaar ah oo aan ku jirin noocyada keydka deggan :)
hoos u dhacaya!
qolka qabow dijo
Website-kani runti waa socod ku socda dhammaan macluumaadka aan ugu baahnaa mowduucan lagu daro mana aanan aqoon cidda aan weyddiinayo.
Ka jawaab qolka qabow
Samba: Server Madaxbanaan 1 2 3